मोरङमा आमाले ‘केटासंग फोनमा धेरै कुरा नगर’ भनेर सम्झाइन्, रिसाएर हिँडेकी १६ वर्षकी छोरी २० हजार भारुमा …? – Dainik Samchar
August 11, 2021 599
ति किशोरीले च ट क देखाउनेले भने आफुलाई नराम्रो न गरेको बयान दिएकी छन् । उनले राम्रा लुगा किनिदिने, डान्स गर्न लगाउने काम मात्र ग रा उँथे । प्रहरीले मायाको फोन कल रे क र्ड (सिडिआर) हेरेपछि बल्ल मायाले ति किशोरीलाई आफुले हरियाणाको गुडगाउँको पुरुषलाई बे चि दिएको बताएकी थिइन् । हरियाणामा बस्ने मोहम्मद मुवारक नाम गरेका व्यक्तिसँग २० हजार लिएर मायाले किशोरीलाई बे चि न् । त्यसपछि उनी मुवारकसँगै हरियाणा पुगेकी थिइन् ।
Prevनेपालमै कसरी सम्भव भयो यस्तो चमत्कार ? आन्द्रा र कलेजो पेटबाहिर निस्किएको शिशुलाई डाक्टरले बचाए
Next“कुलमान न काकापट्टिका न आमातिरका तर पनि किन–किन आफ्नैजस्ता लाग्ने” दीपकराज गिरी